Xaalado Kacsan iyo Cabsi Dagaal oo laga soo sheegayo gobolka Gedo – SBC
Xaalado Kacsan iyo Cabsi Dagaal oo laga soo sheegayo gobolka Gedo
Dhaq dhaqaaq ciidan iyo xiisad dagaal ayaa siweyn loogaga dareemayaa qeybo ka mid ah gobolka Gedo halkaas oo ay ka wadaan dhinacyada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo xarakada Alshabaab.
Degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo oo ka tirsan gobolkaasi ayaa siweyn loogaga dareemayaa Xiisadaha dagaal iyo abaabulka ciidan iyadoo halkaasi ay ma muujinayaan shacabweynaha cabsi ku aadan dagaalo halkaasi ay ku soo gaaraan ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya .
Dhinaca kale xoogaga xarakada Alshabaab oo iyagu ku sugan degmooyinka Baardheere iyo buurdhuubo ayaa waxaa ay soo saareen awaamiir ka dhan ah cidii taageero u muujisa ama lashaqeysa.
Waxay aheyd maalmihii ugu dambeysay markii howlgalo ay ka sameeynayeen ciidamada Xarakada Alshabaab xaafadaha magaalooyinkaasi taas oo ay ku beegsanayaan dad ay sheegeen in ay taageersanyihiin ciidamada DKMG ah.
Dhowaan ayaa xarakada Alshabaab waxay dagaal kula gareen ciidamada DKMG ah deegaano ay ka mid tahay Buusaar halkaas oo ay iminka isku horfadhiyaan labada dhinac.
Sikastaba ha ahaatee ciidamada Dowlada iyo Xarakada Alshabaab xiisada u dhexeysa ayaa waxaa siweyn uga cabsi qaba dadweynaha gobolkaasi degen iyadoona ay ku soo aadeyso xiisadan xili lagu guda jiro bishii barakeysneyd ee Ramadaan iyo xaalado abaareed oo dalka ka jira .